Somaliland Archives - Page 2 of 7 - Puntland Mirror Believable Media Website
August 20, 2018 Puntland Mirror 0
Qardho-(Puntland Mirror) Siciid Cawil Caare, oo ahaa sargaal hore oo katirsan ciidamada Somaliland, ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq jabhadeed oo ka dhan ah maamulka Somaliland. Isaga oo ka soo muuqday muuqaal lagu daabacay You Tube-ka, wuxuu sheegay […]
August 12, 2018 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Sargaal sare oo katirsanaa ciidamada maamulka Somaliland ee gobolka Sanaag ayaa ka goostay ciidamada, sida ay sheegeen warbaahinta Somaliland. Jamaal Maxamed Baaxad oo ahaa taliyaha guutada 3-aad ee ciidamada maamulka Somaliland ee Sanaag […]
August 2, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee Khaatumo Maxamuud Yuusuf Indhosheel ayaa ku eedeeyay Somaliland dilka labo masuul. Isaga oo la hadlayay warbaahinta gudaha, Indhosheel oo ku sugan Garoowe, ayaa ku eedeeyay maamulka Somaliland in ay ka […]
June 24, 2018 Puntland Mirror 0
Laascaanood-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegatay masuuliyada weerar lagu qaaday saldhigyo ay ciidamada Somaliland ku leeyihiin magaalada Laascaanood, guddoomiyaha gobolka Sool Abuukar Cabdiraxmaan Geele ayaa warbaahinta u sheegay maanta oo Axad ah. Guddoomiyaha ayaa sheegay in […]
Laascaanood-(Puntland Mirror) Saldhigyo ciidan oo maamulka Somaliland ku leeyihiin magaalada Laascaanood ayaa xalay oo Axad ahayd waxaa weerar ku qaaday dablay aan la garanayn, sida ilo-wareedyo ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror. Dablayda weerarka geysatay […]
June 20, 2018 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Boqor Cusmaan Aw-maxamuud Buurmadow ayaa maanta oo Arbaco ah laga sii daayay xabsi kuyaala magaalada Hargeysa. Masuuliyiin katirsan maamulka Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in boqorka lagu sii daayay cafis madaxweyne. Boqor Buurmadow […]
June 14, 2018 Puntland Mirror 0
Laascaanood-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Laascaanood maanta oo Khamiis ah. Ilo-wareedyo ku sugan Laascaanood ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in isku dhac dhexmaray ciidamada maamulka Somaliland iyo dadka shacabka […]
June 5, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa cambaareysay lacagta kaashka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ugu deeqday Somaliland. Guddiga difaaca Puntland oo shir saxaafadeed maanta oo Talaado ah ku qabtay Garoowe, ayaa sheegay in lacagtaas kaashka ah ay […]
June 2, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ku eedaysay Somaliland in ay soo qaaday weerarkii xalay ka dhanka ahaa saldhig kuyaala deegaanka Bali-Khadar ee Buuraha Galgala. Shir saxaafadeed uu Garoowe ku qabtay Wasiirka Amniga Puntland Axmed Cabdullahi Yuusuf […]